Burmese taste - Iora: May 2012
Posted by Iora at 6:13 AM 22 comments: Links to this post
ကန်စွန်းရွက်ကြော်၊ ကြာဆံကြော်၊ ကြက်သားအာလူး၊ သခွားသီးနဲ့ ကြက်သွန်ချဉ်၊ တရုတ်နံနံရုိုး နဲ့ ခါဂျက်ဥ၊ ချစ်ပ်စ်၊ ၀က်သားလုံးကြော် နဲ့ ဆလတ်ရွက်၊ ဟင်းချို၊ လက်ဖက်သုပ်
ဒီပွဲကတော့ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာပွဲပါ။ သိပ်ခင်တဲ့တစ်ဖွဲ့ ထဲတွဲခဲ့ကြပြီးအတန်းတူတူတက်ခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြင်သစ်ကုိုသွားတော့မှာမုို့ လို့ သူကလည်းတွေ့ ချင်၊ ကုိုယ်ကလည်းတွေ့ ချင်နှုတ်ဆက်ချင်လို့ စီစဉ်လိုက်တာပါ။ ခွဲကြရမှာမို့ စိတ်မကောင်းပေမဲ့သူက ပီအိတ်ခ်ျဒီသွားယူမှာမို့ သူ့ အတွက်ဝမ်းသာရတဲ့ပွဲပါ။ သူကလည်းသွားခါနီးတော့ထုတ်ပိုးနေရတာနဲ့ အလုပ်တွေများနေတော့ ဘာမှမယူလာနဲ့ ငါပဲချက်လုိုက်မယ်ဆုိုပြီး လုပ်လိုက်တာပါ။ အမြဲတွဲခဲ့ကြတဲ့ကုိုလံဘီယာကသူငယ်ချင်းစုံတွဲရယ်၊ ထိုင်ဝမ်ကတရုတ်မလေးရယ်၊ ပြင်သစ်သွားမဲ့ သူငယ်ချင်း(ဗင်နီဇွဲလားသူချောချောလေး) နဲ့ သူ့ ရဲ့ ဘွိုင်းဖရင်းဒ် (ဘော်လီးဗီးယန်း)ရယ်၊ အုိုင်အိုရာတုို့ စုံတွဲရယ်၊ အုိုင်အိုရာ့ကုိုအမြဲစောင့်ရှောက်တဲ့အမေရိကန်သူငယ်ချင်းစုံတွဲရယ်အတွက်ချက်ပါတယ်။ (သူတို့ ကိုတော့ဘူးတွေနဲ့ ထဲ့ပြီးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆုံတဲ့အထဲမပါပါဘူး) ။ အမေရိကန်သူငယ်ချင်းမလေးကတော့ သူ့ တူမအဆောင်ပြောင်းတာကူရမှာမို့ လို့ မလာနုိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်းအဝေးကုိုရောက်ကုန်ကြပါပြီ။ တစ်ယောက်ကစပိန်မှာ၊ တစ်ယောက်က တစ်ခြားပြည်နယ်မှာ၊ တစ်ယောက်ကဘာရိန်းမှာလုပ်နေရာကနေ တရုတ်ကိုသွားတော့မယ်။
မြန်မြန်နဲ့ စားကောင်း သူတို့ လည်းစားနုိုင်၊ အမြင်မှာလည်းလှ လူလည်းသက်သာ၊ ငွေလည်းသိပ်မကုန်၊ သိပ်လည်းအလုပ်မရှုပ်မဲ့ဟင်းတွေကို သူနဲ့ တုိုင်ပင်ပြီးစီစဉ်ချက်လုိုက်ပါတယ်။ ကျမစီစဉ်လိုက်တာကတော့ ကြက်သားအာလူး(အာလူးကရှိပြီးသား)မဆလာချက်ရယ်၊ ၀က်သားလုံးပြုတ်ကြော်ခြောက်ခြောက်လေးရယ်၊(မကြော်ဘူးလေ။ ကြော်ရင်အချိန်ပေးရတယ်။ လူပင်ပန်းတယ်။ညှော်တယ်။ ပျော့သွားရင်လည်းစားမကောင်းဘူးလေ)လက်ဖက်သုပ်ရယ် (ဒါလည်းအဆင်သင့်ရှိပြီးရယ်ဒီမိတ်အထုတ်)၊ ကညွတ်ဖြစ်ဖြစ်အစိမ်းရောင်အရွက်တစ်မျိုးကြော်ရယ် (ကန်စွန်းရွက်ကြော်ဖြစ်သွားပါတယ်။ မြန်တယ်လေ။ကညွတ်ကဈေးကြီးနေပြီးကန်စွန်းရွက်ကသက်သာနေတယ်။) နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ပို့ စ်က ပုံစံမျိုး ကြာဆံကြော်ရယ်၊ ကြက်ရုိုးပြုတ်ဟင်းချိုကို ကြက်သွန်မြိတ်၊ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ငရုတ်ကောင်းခတ်နဲ့ Appetizer ကိုတော့လွယ်လွယ်ရှိနေတာကိုဘဲလှအောင်ပြင်ထဲ့လိုက်ပါတယ်။ အာလူးကြော်ရယ်၊ နောက်ထပ်ချစ်ပ်တစ်မျိုးရယ်၊ ကျမတော့သိပ်သဘောကျတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီကဘိုပွဲတွေမှာအမြဲလိုပါလေ့ပါထရှိတဲ့ တရုတ်နံနံရုိုးရယ်၊ ခါဂျက်ဥရယ်နဲ့ သူနဲ့ တွဲစားဘုို့ ဟုမ်းမိတ်ဆော့စ်တစ်မျိုးကိုပဲပြုတ်နဲ့ ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတုို့ လည်း ပွဲရှိလို့ မစဉ်းစားချင်ရင်ဒီလိုပဲလုပ်ကြည့်ရင်သိပ်မပင်ပန်းပဲလှလှပပနဲ့ ပြီးသွားပြီး အားလုံးလည်းအားပေးကြတာတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ ကျမက တနင်္ဂနွေနေ့ ခင်းပိုင်းမှာစားဘို့ စီစဉ်ထားတာပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ညှိလိုက်ကြတာလေ။ အဲတော့သောကြာနေ့ ညမှာ ကျောက်ကျော နှစ်ဘန်း (အဖြူသက်သက်ရယ် သာကူပန်းရောင်နဲ့ အစိမ်းရောထားတာရယ်)အရင်ထုိုးထားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကလည်းဘာမှမကြာပါဘူး။ ပင်လည်းမပင်ပန်းဘူး။ နာရီဝက်ဆုိုတစ်ဘန်းရတာပါဘဲ။ အဲဒီညကတည်းကတစ်ဘန်းကိုလှီးပြီးဘူးတွေထဲထဲ့ပြီးရေခဲသေတ္တာထဲထဲ့ထားလိုက်တယ်လေ။ နောက်နေ့ တဘန်းကိုလှီးပြီးထဲ့ပေါ့။ ကျောက်ကျောကတော့လွယ်လို့ ထုိုးနည်းမလိုပါဘူးနော်။
သောကြာမှာဈေးဝယ်တယ်။ ကြက်သားကိုစနေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာဆားဆနွင်း၊မဆလာ၊ ဒိန်ချဉ်၊ ကြက်သားမှုန့် ၊ ငံပြာရည်နဲ့ နယ်ပြီးနှပ်ထား။ ကြက်သားနယ်ပြီးတော့ကန်စွန်းရွက်ရယ်၊ ကြာဆံကြော်ရယ်ထဲထဲ့မဲ့ အသီးအရွက်တွေ (ခါဂျက်ဥ၊ ဘရော့ကလီ၊ ပန်းမုန်လာ၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ တရုတ်နံနံတုို့ ကိုလည်းသင်ပြီးလှီးချွတ် ရေစစ်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ရေအရမ်းစစ်အောင်မစောင့်ပဲ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထဲ့ထားလိုက်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူကတော့နကိုယ်တည်းကသင်ပြီးသားတွေရှိတော့သင်စရာမလိုတော့ဘူး။ ဂျင်းပဲသင်ထားလိုက်တယ်။ ပဲပြုတ်နဲ့ ပုဇွန် အထုတ်တွေကိုရေခဲသေတ္တာအောက်ထပ်မှာရွှေ့ထားလိုက်တယ်။ နောက်နေ့ သုံးရင်မခဲနေအောင်လို့ လေ။
ညနေပုိုင်းကျတော့ကြက်သားကိုဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူနီ၊ မဆလာ၊ ပျဉ်းတော်သိမ်၊ ဇီယာနဲ့ ဆီသတ်ပြီးမှ ပေါင်းအိုးထဲမှာရေကိုကြက်သားမြုတ်ရုံထဲ့ပြီးတည်လိုက်ပါတယ်။ ပေါင်းအိုးနဲ့ ဆိုတော့ ဆယ်မိနစ် ကျော်ကျော်လောက်ဆုိုအသားကကျက်ပြီး အာလူးရောလို့ ရတဲ့အနေရပြီ။ ဆီလည်ရေလည်အနှစ်နဲ့ ချက်မှာဆုိုတော့ ရေကိုများများထဲ့ထားပါတယ်။ အာလူးကလည်းအရည်တွေစုတ်အုန်းမှာဆုိုတော့များများထဲ့မှ မခြောက်မှာပါ။ တနင်္ဂနွေမနက်ကျတော့မှ အာလူးဆားနယ်ပြီးရောလိုက်ပါတယ်။ အာလူးကိုနဲနဲလည်းကြေစေချင်။ အားလုံးလည်းမကြေစေချင်ဆုိုတော့ တ၀က်ကိုဒီတုိုင်းရော၊ တ၀က်ကိုဆီနဲ့ လှိမ့်ပြီးမှထဲ့လိုက်ပါတယ်။ ချခါနီးတော့မဆလာလေးထပ်အုပ်တော့မွှေးမွှေးလေးပေါ့။
ကြာဆံကြော် (ပြီးခဲ့တဲ့ပို့ စ်မှာကြော်တဲ့အတိုင်းကြော်ထားတာပါ။ အသားမပါပါဘူး။ ပုဇွန်နဲ့ ကြက်ဥနဲ့ အသီးအရွက်တွေပဲပါပါတယ်။)
သခွားသီး၊ကြက်သွန်နီ နဲ့ ငရုတ်ဆီ၊ သကြားလေးနဲနဲထဲ့ပါတယ်။
သူတို့ တွေလာပြီးတော့မှ ကန်စွန်းရွက်ကြော်ပါတယ်။ စားပြီးတော်တော်လေးကြာမှရုိုက်ရလို့ နဲနဲမဲနေပြီ။
ဧည့်သည်တွေစားနေတုန်းမှာမြန်မြန်ရုိုက်ရတော့မြင်တဲ့အတုိုင်းဝါးတားတားဘဲ။ မကုန်ခင်မြန်မြန်ရုိုက်ရတာ။၀က်သားလုံးကိုလည်းစနေနေ့ ကတည်းက ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ဆား၊ ခရုဆီ၊ ကြက်သားမှုန့် နယ်လုံးပြီးပြုတ်ကြော်လုပ်ထားလုိုက်ပါတယ်။ ကျမကစနယ်ကတည်းကချက်မဲ့ဒယ်အိုးကြီးထဲထဲ့ပြီးနယ်ပြီးဘေးမှာလုံးပြီးစီသွားလိုက်တာ။ ဆေးရတာသက်သာအောင်ရယ်၊ အချိန်ကုန်သက်သာအောင်ရယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ရေနဲ့ဆီနဲ့ တစ်ခါတည်းထဲ့ပြီး အသားလုံးတွေမာသွားတော့မှတစ်လုံးစီပုံမပျက်အောင်ဇွန်းနဲ့ အသာလေးမွှေရင်းခွဲသွားပါတယ်။ ဆီပြန်တဲ့ထိတည်ထားလုိုက်ပါတယ်။ မနက်စားခါနီးကျမှ ရဲရဲလေးဖြစ်အောင်အပူပေးပြီးပြန်လှိမ့်ပြီးမှ ပွဲပြင်လိုက်ပါတယ်။ ပန်းကန်လည်းလှ တွဲစားလို့ လည်းရအောင် အမေရိကန်ရုိုမိန်းဆလတ်ရွက်နဲ့ ဘေးမှာစိတ်ထားတဲ့သံပုရာသီးနဲ့ တွဲထဲ့လိုက်ပါတယ်။
ပုံတွေဝါးနေတာတော့သီးခံလက်စနဲ့ သီးခံတော့နော်။ ဒါကလက်ဖက်သုပ်။ သူ့ ကိုလည်းဂေါ်ဖီတွေစနေနေ့ ကတည်းကလှီးပြီးနယ်မဲ့အိုးထဲအဆင်သင့်ထဲ့အုပ်ထားလိုက်တာ။ ခရမ်းချဉ်သီးပါရေဆေးပြီးထဲ့ထားလိုက်တယ်။ မနက်ကျတော့ကြက်သားထဲအာလူးရောနေချိန်မှာခရမ်းချဉ်သီး ရော သံပုရာသီးရောလှီးထဲ့ထားလိုက်တယ်။ လက်ဖက်ပုလင်းတွေအဆင်သင့်ဘေးမှာထားထားလိုက်တယ်။ မြန်အောင်လို့ ။ စားခါနီးမှလက်အိတ်စွတ်ပြီးအားလုံးထဲ့ငံပြာရည်၊ နဲ့ဆီထဲ့ပြီးနယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ငရုတ်သီးမစားနုိုင်ကြတော့ဘေးမှာပဲပုံပေးလိုက်ပါတယ်။
ချစ်ပ်စ်..နဲ့ ပဲပြုတ် Humus . Humus ဆုိုတာ popular ဖြစ်တဲ့ Middle Eastern dip တစ်မျိုးပါ။ သူတုို့ အရှေ့ အလည်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုစားတယ်မသိ။ Bread နဲ့ စားတယ်လို့ တော့ကြားဘူးတယ်။ ဒီမှာတော့အဲဒီတရုတ်နံနံရုိုးတုို့ ၊ ခါဂျက်ဥတုို့ ၊ ငရုတ်သီးအပွတောင့်ရောင်စုံတွေလှီးထားတာတုို့နောက်ပြီး မက်ဆီကန်အစာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ တော်တီးယာလို့ ခေါ်တဲ့ချစ်ပ်စ်တွေနဲ့ တွဲစားကြပါတယ်။( Tortilla chips ကို ခရမ်းချဉ်သီးပန်ထွေဖျော်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ လည်းစားကြပါသေးတယ်။) အိုင်အိုရာလည်းကုိုယ်ကြိုက်တာတွေကုိုယ်ထဲ့ပြီးအိုင်အိုရာ့စတုိုင်လုပ်လုိုက်ပါတယ်။ ပဲပြုတ်ကို ရေနဲနဲ့ ထဲ့၊ ကြက်သွန်နီကြော်ထဲ့၊ ဆားနဲနဲထဲ့၊ မဆလာနဲနဲထဲ့ သံပုရာသီးနဲနဲညှစ်ထဲ့ပြီး ဘလင်ဒါနဲ့ ကြိတ်လိုက်တာ အပေါ်ကလို တုို့ စားလို့ ရသွားပါတယ်။ သူတို့ လည်းအရမ်းကြိုက်ကြလို့ လုပ်နည်းမေးနေသေးတယ်။း)) အတုကို။
စနေနေ့ ကတည်းကဘူးထဲထဲ့ထားပြီးဘူးလိုက်ပဲချကျွေးလိုက်တော့တယ်။း)
အုန်းထမင်း နဲ့ ရုိုးရုိုးထမင်းနှစ်မျိုးချက်ပါတယ်။ ဒါကအုန်းထမင်း။ ထမင်းနှစ်အိုးလုံးကို နေ့ ခင်း ၁၂ နာရီမှာစတည်ပါတယ်။ ဒါမှ နေ့ ခင်း ၁နာရီကျော်မှာအဆင်သင့်လည်းဖြစ်နေအောင်ပူလည်းပူနေအောင်ပလတ်မဖြုတ်သေးဘဲတင်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ပန်းကန်တွေဇွန်းတွေခရင်းတွေခွက်တွေအားလုံး ဘူဖေးလုိုကုိုယ့်ဖာသာကိုယ်ထဲ့စားနုိုင်အောင်အဆင်သင့်တင်ပေးထားလိုက်ပါတယ်စနေနေ့ ညကတည်းက။ ပြီးတော့အပေါ်ကနေအားလုံးကိုအုပ်ထားပြီး မနက်ကျမှအုပ်ထားတာကိုဖယ်ထားလိုက်ပါတယ်။ သူတုို့ လည်းစိတ်ကြိုက်ထဲ့။ အိမ်ရှင်လည်းသက်သာပေါ့။
အုိုင်အုိုရာတုို့ အိမ်ကလက်ဖက်သုပ်ရင်ဂေါ်ဖီဖတ်ကြီးမှကြိုက်တယ်။ သေးရင်နယ်ပြီးရင်နွမ်းဖတ်သွားလို့ မကြိုက်ဘူးလေ။
အချိုပွဲ အုန်းနို့ သာကူကျောက်ကျော
ကဲ..လာပါပြီ ကိုကိုတို့ မောင်မောင်တုို့ အကြိုက်၊ ခလယ်ကပုလင်းကဘီယာပုလင်း။ဘယ်ဘက်က စက္ကူဘူးကလည်းဘီယာဘူးဘဲ။
ကျမရဲ့ သူကတော့ ဘူးဝါနဲ့ ဘီယာကိုကြိုက်ပါတယ်။ ကျမလည်းသူငယ်ချင်းတွေပျော်အောင်ရယ်အရသာသိချင်တာရယ်ကြောင့်ခလယ်က ဘီယာကိုသောက်ပါတယ်။ တော်တော်ကောင်းတယ်။ ကျမမုန်းတဲ့ချဉ်စုတ်စုတ်နံ့ မရှိဘူး။ အရသာလည်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျမတော့လမ်မနိတ်ပဲသောက်တာများပါတယ်။ ဒါတောင်နောက်နေ့ ကျခေါင်းကကိုက်ချင်နေတယ်။
လာပါပြီ။ ကိုကိုကာလသားတုို့ အကြိုက် Tequila. တီကီးလာဆုိုတာမက်ဆီကန်အရက်တစ်မျိုးပါ။ သိပ်ပြင်းပါတယ်။ သူ့ ကုိုသောက်ရင် ဖန်ခွက်သေးသေးလေးထဲကိုထဲ့ပြီး straight သောက်ရင်သောက်။ " lick..sip.. suck" လို့ ပြောပြီးသောက်တဲ့ နည်းနဲ့ သောက်ရင်သောက်။ လက်ညှုိုးအရင်းနားမှာ ဆားကိုတင်၊ ရှောက်သီးစိပ်ကို အဆင်သင့်ထား ဖန်ခွက်သေးသေးထဲကုိုတီကီးလာထဲ့။ ၀မ်း တူး သရီး ဆုို ဆားကိုအရင်လျက်၊ တီကီးလာကိုမော့၊ ရှောက်သီးစိပ်ကိုပါးစပ်နဲ့ မြန်မြန်စုတ်။ ပြင်းလွန်းအားကြီးလို့ လျှာတွေအာတွေပူဆင်းသွားတာပေါ့။ အိုင်အိုရာကတော့တီကီးလာကိုပင်းတယကိုအမေရိကန်သူငယ်ချင်းမလေး (ကြယ်ကြွေတာကြည့်တဲ့သူငယ်ချင်းလေ)နဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားကြတုန်းကဟုိုတယ်မှာညစာမစားခင် အပေါ်ကနည်းကိုသင်ပေးခဲ့လို့ မြန်မာပြည်မှာတတ်လာခဲ့တာပါ။ ပြင်းသလားတော့မမေးနဲ့ ဘဲ။ ဒီမှာလည်းသူငယ်ချင်းယောက်ျားလေးတွေဂုဏ်ပြုကြ နှုတ်ဆက်ကြရင်အဲဒါနဲ့ ဘဲလေ။ တစ်ချိန်လုံးကြုံနေရတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေက အင်တာနေရှင်နယ်လူမျိုးစုံ၊ ဆုိုက်မျိုးစုံ၊ အရွယ်မျိုးစုံ။ အိုင်အိုရာကအသက်အကြီးဆုံး။ ကြီးကြီးငယ်ငယ်အိုင်အိုရာတုို့ ရဲ့ ကျောက်ကျောနဲ့ လက်ဖက်သုပ်ကိုတော့မကြိုက်တဲ့သူကိုမတွေ့ သေးဘူး။ အားလုံးလည်းအားရပါးရစားကြ စကားတွေပြောကြနဲ့ အဲဒီနေ့ ကတော်တော်ပျော်ကြပါတယ်။ သည်လေဒီ ကိုသီရေတာမှာ သွားကြည့်ကြဘို့ တောင်ဆက်ချိန်းထားကြသေးတယ်လေ။ ကဲကြပုံတော့။ ခလယ်ကဘီယာဘူးရယ်၊ နောက်က ၀ုိုင်ပုလင်းရယ်၊ ကုတ်ခ်ပုလင်းရယ် နဲ့ အုိုက်စ်ခရင်ဘူးတွေ သူတို့ ကသယ်လာကြပါတယ်။
ဒီပွဲလည်းထုံးစံအတိုင်းလက်ကျန်တွေရှိနေသေးတယ်လေ။ သူကတော့ကြက်သားဟင်းတွေမကုန်ခင် အုန်းထမင်းထပ်ချက်ကြွေးပါတဲ့လေ။ ၀က်သားလုံးကတော့အကုန်ပြောင်ပြီ။
သူငယ်ချင်းသွားတော့မယ်ဆုိုတော့ရှိနေတုန်းက ခဏခဏမတွေ့ ဖြစ်ခဲ့တာနောင်တရနေတာ။
အမြဲပါဘဲလေ။ နေ့ တစ်ဓူဝကိစ္စတွေနဲ့ ဘ၀ကကုန်နေရတယ်။
တွေ့ ကြုံ ဆုံကွဲ ဓမ္မတာဘဲ ဆုိုပေမဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးကိုတော့ လွမ်းနေမိဦးမှာပါ။
အိုင်အိုရာလည်းအိပ်ချင်လှပြီ။ ဘုရားလည်းမရှစ်ခုိုးရသေးဘူး။ မနက်လေးနာရီထုိုးသွားပြီ။ မြန်မြန်အိပ်မှ။
ထုံးစံအတိုင်းလာလည်လို့ မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ။
Posted by Iora at 4:05 AM 32 comments: Links to this post
Labels: Chicken, Pork, Rice, Rice Stick
ကြာဆံကြော်စားထားတာကြာပါပြီ။ တစ်ခါမှမတင်ဖြစ်သေးလို့ တင်လုိုက်ပါတယ်။
ကျမထဲ့ထားတဲ့အသီးအရွက်တွေကတော့ ပန်းမုန်လာ၊ ဘရော့ကယ်လီ၊ ခါဂျက်ဥ၊ ဂေါ်ရခါးသီး၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊တရုတ်နံနံတုို့ ပါ။ ရွှေပဲသီးတုို့ ဘိုစားပဲတုို့ ကြိုက်ရင်ထဲ့နုိုင်ပါတယ်။
ကြာဆံကိုမကြော်ခင်ရေစိမ်ထားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အသီးအရွက်တွေရေဆေးမိမိနှစ်သက်သလိုလှီးဖြတ်ထားပါတယ်။ ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်သားကို
အနေတော်လေးတွေလှီးထားပါတယ်။ အစိမ်းလိုက်ဆီသတ်လည်းရပါတယ်။ ကျမကတော့လိုတာသုံးရအောင်အရင်နေ့ မှာကတည်းက ပြုတ်ထားလို့ ပါ။ ပြုတ်ထားတော့ သုတ်သုတ် ကြော်ကြော် မြန်တယ်လေ။ ဟုိုထဲ့ဒီထဲ့ထဲ့ရတာလည်းအဆင်ပြေလို့ ပါ။
ကြာဆံကြော်ရတာကြော်လေ့ကြော်ထရှိရင်ဘာမှမခက်ပါဘူး။ သူ့ ကိုကြော်ရင်ကြာဆံမျှင်တွေပြတ်ပြီးမသွားအောင်သတိလေးထားလိုက်ရင် လှလှပပလေးရပါတယ်။ ပြတ်နေရင်တော့သိပ်မလှတော့သူများကိုကြွေးရင်မျက်နှာပန်းသိပ်မလှဘူးပေါ့။ ကျန်တာကတော့ဘာမှပညာမပါပါဘူး။ ကျမတုို့ အမေကကြာဆံကြော်နေရင်ပျော့ပြီးပြတ်ကုန်ရင်သဘောမကျပါဘူး။ အမြဲသတိပေးပါတယ် မပြတ်စေဘို့ ။ အမေကသိပ်အသေးစိပ်တာဘဲ။ ဂျီးများတာဘဲလို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတွေးခဲ့သလောက် ကျမလည်းအမေ့ခြေရာတစ်ထပ်တည်းနင်းမှန်းမသိနင်းနေမိလျက်သားဖြစ်နေတာ မကြာခဏသတိပြုမိလာပါတယ်။
ကြက်တံဆိပ်ငရုတ်ဆီနဲ့ သခွားသီး၊ ကြက်သွန်ချဉ်
ပထမဆုံးဆီနဲနဲနဲ့ ကြက်ဥတွေမွှေကြော်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ပန်းကန်တစ်ချပ်ထဲဆည်ထဲ့ထားပါတယ်။
၀က်အူချောင်းလည်းသပ်သပ်ကြော်ပြီးဖယ်ထားပါတယ်။ ဒါကကျမပန်းကန်ကိုရုိုက်ထားလို့ ဝက်အူချောင်းမပါလာပါဘူး။ ၀က်အူချောင်းလည်းငယ်ငယ်ကကြိုက်သလောက်ခုသိပ်မကြိုက်တော့ပြန်ဘူးလေ။
ပြီးတော့ ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာဆီသတ်ပြီး အသားတွေနဲ့ အသီးအရွက်တွေထဲ့ ခရုဆီထဲ့။ ဆားပါးပါးထဲ့။ သကြားလေးနဲနဲထဲ့။သက်သတ်လွတ်စားချင်ရင် အသီးအရွက်ချည့်ထဲ့ကြော်ရုံပါဘဲ။ သက်သတ်လွတ်လည်းစားကောင်းပါတယ်ရှင်။
အသီးအနှံတွေကုိုယ်နှစ်သက်သလောက်အနေရခါနီးရင် ရေစစ်ထားတဲ့ကြာဆံထဲ့။ ခရုဆီထဲ့မွှေ။ ခဏဘဲ။ သာသာလေးမွှေပြီး အားလုံးလည်းသမ၊ ကြာဆံလည်း ကျက်။ အစောကဖယ်ထားတဲ့ ကြက်ဥကြော်တုို့ ဝက်အူချောင်းတုို့ ထဲ့။ တရုတ်နံနံ နဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်ဖြတ်ထဲ့။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် လေးဖြူးလိုက်ရင် သုံးဆောင်လို့ ရပြီပေါ့။ ၀က်အူချောင်းကမဖယ်လည်းရပါတယ်။ ကျမကသူ့ အနံ့ ကိုမလိုချင်လို့ ဖယ်ထားတာပါ။ တကယ်လို့ ကြာဆံကစိမ်ထားတာလိုရင် ရေလေး ဖြန်း ဒါမှမဟုတ်
အရုိုးပြုတ်ရည်တည်ထားတာရှိရင်အရုိုးပြုတ်ရည်လေးနဲ့ နဲနဲဖြန်းကြော်လည်းကောင်းတယ်။ ဟင်းချိုလေးလည်းလုပ်လုို့ ရတာပေါ့။ မတည်ထားလည်းရပါတယ်။ ခရုဆီနဲ့ သကြားလေးနဲ့ ဆုိုအုိုခေပါတယ်။ ကျမတော့တည်ထားတဲ့အရုိုးပြုတ်ရည်ထဲကို အရသာပြင်ပြီး သောက်ခါနီးကျကြက်သွန်မြိတ်နဲ့ငရုတ်ကောင်းလေးခပ်လိုက်တာပေါ့။
ကျမတော့ဟင်းချိုပန်းကန်မရုိုက်ထားလိုက်တော့ဘူး။ ရုိုက်ရင်စားတဲ့အခါကျအေးနေပြန်ရော။ ခုနောက်ပိုင်းဓါတ်ပုံရုိုက်ရတာပျင်းပျင်းနေလို့ သူကတောင်မစားခင်ဓါတ်ပုံမရုိုက်တော့ဘူးလားတဲ့။
တစ်ချို့ ကတော့ ပဲငံပြာရည်အကြည်တုို့ အနောက်တို့ ထဲ့ကြော်လေ့ရှိတယ်။ ကျမကတော့မထဲ့ဘူး။ ခပ်ဖြူဖြူလေးကိုပိုသဘောကျလို့ ပါ။ ပဲငံပြာရည်နံ့ ထွက်နေတာလည်းမကြိုက်လို့ ပါ။ ကြိုက်တတ်ရင်တော့ထဲ့လို့ ရပါတယ်။
ကျမအသစ်မတင်ပေမဲ့လည်း အမြဲလိုလို လာလာဖတ်တဲ့မိတ်သစ်တွေကုိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ။
ကွန်မန့် မချန်ခဲ့ပေမဲ့လည်း လာလည်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပြီးသားပါရှင်။ အားတဲ့အခါတော့ထပ်လာလည်ပါဦးလို့ ဖိတ်ပါတယ်။
Posted by Iora at 2:22 AM 25 comments: Links to this post
Labels: Rice Stick